Email ဆိုတာဘာလဲ? - MMITSG
မေး ဘာလဲဗျ ကိုယ်ပိုင် Email ဆိုတာ?
ဖြေ ဒီလိုလေဗျာ၊ လူကြီးမင်း Gmail သုံးဖူးတယ် မဟုတ်လား။ လူကြီးမင်း gmail လိပ်စာရဲ့ နောက်မှာ @gmail.com ဆိုတာသိမှာပေါ့။ ကျွန်တော်ပြောတာက @yourcompany.com ဆိုတာ မျိုးဗျ။
မေး ခင်ဗျားကလဲ ဘာများ ကွာမှာ မို့လို့လဲ ?
မေး ညွှန်းတာတော့ ကောင်းသဗျ၊ gmail လဲ အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲဗျာ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း .com နဲ့ Email ဆိုတာကြီးက အလုပ်ရှုပ်က ရှုပ်သနဲ့?မေး ညွှန်းတာတော့ ကောင်းသဗျ၊ gmail လဲ အလုပ်ဖြစ်နေတာပဲဗျာ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း .com နဲ့ Email ဆိုတာကြီးက အလုပ်ရှုပ်က ရှုပ်သနဲ့?
မေး အေးပါ၊ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါလဲ ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပဲ။ ဒါနဲ့ မရှင်းတာက ခင်ဗျားပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း .com နဲ့ email ဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုးကွာလို့လဲ?
မေး ခင်ဗျား အပြောကတော့ ကောင်းတယ်၊ ဈေးကြီးတယ်ဗျ၊ ပြီးတော့ ကျုပ်လဲ လုပ်တတ် တာမဟုတ်ဘူး။ ရှပ်တယ်ဗျာ လုပ်ရတာ?
ဖြေ အရင်တုန်းကလို ဈေးကြီးတယ် အောက်မေ့လို့လား။ ခင်ဗျား အတွက် ကိုယ်ပိုင် .com နဲ့ email အကောင့် (၃)ခုကို သုံးချင်သလောက်သာသုံး တစ်နှစ်ကို ခြောက်သောင်းဗျာ၊ တစ်လကို ငါးထောင့်၊ တစ်ရက်ကို ၁၆၆ ကျပ်။ ကဲ မတန်လားဗျာ။
မေး ဟုတ်ပါပြီဗျာ၊ ခင်ဗျားရုံးကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ?
ဖြေ လိပ်စာပြောလိုက်မယ်ဗျာ၊ အဆောင် (၁၄)၊ (၄)လွှာ၊ Kanaung Hub Lab၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တဲ့ဗျာ။
ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉ ၉၅၄၃၅၄၄၄၅, ၀၉၄၂၁၆၁၅၅၅၄ ကို ဆက်လိုက်ပါဗျာ။